အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည် UK မှဆယ်ကျော်သက်များ ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အထိ (၂၀၂၀) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသုတေသနပြုခြင်း
အယ်လီနာ Martellozzo, Andrew Monaghan , ဂျူလီယာဒေးဗစ်ဆန်, ...
ပထမဦးစွာ Published ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2020
ဤဆောင်းပါးသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိအသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက် ၁၁၀၀ နီးပါးကိုလေ့လာမှုတစ်ခုမှ (အချက်အလက်သုံးမျိုးပါနမူနာပုံစံဖြင့်) ကိုလေ့လာထားပြီးအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုခြုံငုံဖော်ပြထားသည်။ ဒီဆောင်းပါးကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ခြင်းအားကြည့်ရှုသူများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။ ထိုဆယ်ကျော်သက်များ၏သဘောထားသည်ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိပြောင်းလဲသွားသည်ကိုလေ့လာသည်။ တွေ့ရှိချက်များအရပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာနှစ်မျိုးလုံး၏လူမှုရေးပေါ်လစီဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုခြုံငုံ။ နိဂုံးချုပ်သည်။
keywords ကလေးများ, ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု, ကွန်ပျူတာ -mediated ဆက်သွယ်ရေး, စစ်တမ်း, အင်တာဗျူး, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (ICT) နှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ
အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လာခြင်းသည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့ကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အချက်များပေါင်းစပ်မှုကြောင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းတိုးလာခဲ့သည်။ သူတို့အားတူညီသောထုတ်ကုန်များ၏တိုးမြှင့်ပါဝါ; Wi-Fi ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ကိရိယာများတိုးလာမှု။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ကိရိယာများတိုးလာခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့မှုသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုကြည့်ရှုရန်မည်သို့ ဦး တည်စေကြောင်းစူးစမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ဤထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များကိုသိရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ လူများသည် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်လူများအားကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်တရား ၀ င်မည်ဟုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များတွင်ဥပဒေများပြဌာန်းခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ၎င်းသည်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အဝတ်အချည်းနှီး / တစ်ပိုင်းတစ်စနှင့်အချည်းနှီးဖြစ်သောလိင်ပုံရိပ်များကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေပြဌာန်းထားသည်။ စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များကဲ့သို့သောအားကောင်းသောမီဒီယာစွမ်းရည်နှင့်ရွေ့လျားမှုရှိသည့် Wi-Fi စနစ်ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များကသူတို့၏နေအိမ်များနှင့်ပိုမိုအသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းကို Social Networking Sites (SNSs) နှင့် Snapchat နှင့် Instagram တို့ကဲ့သို့ပုံရိပ်မျှဝေခြင်း application များမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူစဉ်းစားသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်ပိုမိုပျံ့နှံ့နေသည်။
အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုစည်းထားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၏အတိုင်းအတာနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ကွဲပြားသောလူ ဦး ရေအချိုးအစားပြောင်းလဲမှုများကိုခြုံငုံ။ ဖန်တီးရန်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံနှင့်မည်သို့ပတ်သက်မှုသဘောသဘာဝကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတင်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့မြင်သည့်အရာနှင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ခံစားရပုံနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူမည်သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များစွာသောနမူနာများအကြားအပြုအမူများနှင့်သဘောထားများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူ ဦး ရေအပေါ်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောတွေ့ရှိချက်များကိုကန ဦး ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်ထားရှိသည့်သီအိုရီဆိုင်ရာရပ်တည်ချက်ကိုအတည်ပြုရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်အတွက်အသုံးပြုခြင်းထက်ရေနံရှာဖွေရေးကွင်းဆင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ရလဒ်များသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောဆိုရန်များစွာကျန်ရှိနေသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Self-generate လုပ်ထားသောပုံရိပ်များ (သို့) sexting များကိုမျှဝေခြင်းသည်အသက် ၁၁ မှ ၁၆ နှစ်ရှိဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ“ sexting” အယူအဆနှင့်လူငယ်များမည်မျှအတိုင်းအတာအထိဖိအားပေးမှုများ၊ အလားအလာရှိသောဖိအားများ၊ လူသိများသို့မဟုတ်မသိသောအခြားသူများမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုအဝတ်အချည်းစည်းသို့မဟုတ် seminaked ပုံရိပ်တွေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးပေါ်လစီသက်ရောက်မှုနှစ်ခုအားဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်နိဂုံးချုပ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များသည်အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အထိဖြစ်သော်လည်းအခြားအလယ်တန်းသုတေသီများသည်အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်အကြားရှိသူများကို၎င်းတို့၏အမျိုးအစားများတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကြည့်ရှုပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုနေသောဆယ်ကျော်သက်များသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါကမည်သည့်ဥပဒေများကိုမျှချိုးဖောက်ခြင်းမရှိပါ (အမှု ၅၊ ပုဒ်မ ၆၃ မှ ၆၇ အရပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ ၂၀၀၈) ။ ထိုရုပ်ပုံများတွင်လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ ကိုခြိမ်းခြောက်နေသောပုံများပါ ၀ င်သည်။ လူတစ် ဦး ၏စအို၊ ရင်သားသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါသည်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာရဖွယ်ရှိသောနေရာများ၊ နှင့် necrophilia သို့မဟုတ် bestiality ၏သာဓက (သရဖူတရားစွဲဆိုမှုဝန်ဆောင်မှု [CPS], 2017) ။ သို့သော်ဗြိတိန်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအားထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှတားမြစ်ရန် PornHub ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မြီးကောင်ပေါက်များသည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်ပုံများကိုပုံဖော်ခြင်းသည်တရားမ ၀ င်ဖြစ်သည် (ဆယ်ကျော်သက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၇၈၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရေးအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် S18 နှင့်လိင်ဆိုင်ရာပြစ်မှုများအက်ဥပဒေ ၂၀၀၃၊ s18) ။ သားသမီးတို့၊
လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုဟုယူမှတ်ခံရနိုင်သောဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ၏ရုပ်ပုံများကိုပြုလုပ်ရန်၊ ပေးပို့ရန်၊ တင်ရန်၊ ပိုင်ဆိုင်ရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်မှာပြစ်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် ၁၈ နှစ်အောက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏ပုံများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ထံသို့ကလေး၏ထိုပုံရိပ်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နိုင်သည်။ သို့သော် CPS မှထုတ်လုပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များသည်ပုံများကိုဝေမျှသောအခါရှင်းလင်းပြတ်သားစေသည် သဘောမတူ ဆယ်ကျော်သက်ရငျးနှီးမှုအကြားတစ် ဦး တရားစွဲဆိုမှုအလွန်မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အစား၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်များနှင့်အတူအနာဂတ်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ သဘောတူမှုခွဲဝေမှုကိုတရားရုံးတွင်မည်သို့စီရင်ဆုံးဖြတ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာမသိရသေးပေ။CPS၊ ၂၀၁၈).
စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များမတိုင်မီကဆယ်ကျော်သက်များသည်အင်တာနက်ကိုသုံးရန်မိဘများ၏စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများ၊ အိမ်သုံးလက်ပ်တော့များသို့မဟုတ်ကျောင်းရှိပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။Davidson & Martellozzo, 2013) ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်အရာရာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ နေရာအနှံ့အပြားတွင်တွေ့မြင်နေရသည့် Wi-Fi သည်အိမ်နှင့်ဝေးသောမိဘ၏ကြီးကြပ်မှုမှဝေးကွာသောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်၊ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြားလူငယ် ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းများတပ်ဆင်ထားကြသည် (Ofcom၊ ၂၀၁၆) နှင့်လူမှုစီးပွားရေးအုပ်စုအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးသည်စမတ်ဖုန်းပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိချေ။Hartley၊ ၂၀၀၈).
ကနေဒါကုမ္ပဏီ MindGeek မှ PornHub ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများစသည်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်သက်သေပြနိုင်သည်မှာအင်တာနက်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သော၊ လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ နှင့်၎င်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ၊ Instagram၊ WhatsApp နှင့် Snapchat တို့ကဲ့သို့သောလိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။Alexa၊ ၂၀၁၈) ။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုမှုအချိုးသည် ၈၃% မှ ၁၀၀% အထိမြင့်တက်နိုင်ပြီးအမျိုးသမီးများအတွက် ၄၅% မှ ၈၀% အထိရှိနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းသည်တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်နေ့ကွဲပြားနိုင်သည် (ခန့်မှန်းထားသည်)Horvath et al ။ , 2013) ။ ပြီးခဲ့သည့် ၃ လမှ ၆ လအတွင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုကြည့်ရှုသူများအားအာရုံစိုက်သောဥရောပလတ်တလောလေ့လာမှုများကဆယ်ကျော်သက်များအားလုံးအတွက် ၁၅% မှ ၅၇% အထိနှုန်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။Horvath et al ။ , 2013).
ဒတ်ခ်ျသုတေသီများ Valkenburg နှင့် Peter's (၂၀၀၆) လေ့လာမှုအရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ၇၁% နှင့်အမျိုးသမီး ၄၀% (၁၃ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အရွယ်) တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအချို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ မကြာသေးမီက၊ Stanley et al ။ (၂၀၁၈) ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံမှအသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြားလူငယ် ၄,၅၆၄ ယောက်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုသုံးသပ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေကြည့်ရှုခြင်းကို ၁၉% မှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားတွင်ရှိသည်။
အွန်လိုင်းအန္တရာယ်များတဲ့အပြုအမူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သုတေသန ဘလင်း (2013) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောတိုတောင်းသောမက်ဆေ့ခ်ျများ (တစ်ခါတစ်ရံ "sexts" ဟုလူသိများ) သည် ၆၀% အထိကိုမူလလက်ခံရရှိသူထက် ကျော်လွန်၍ ဖြန့်ဝေနိုင်သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် ရုပ်ပုံ၏ကလေးအကြောင်းအရာအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးဆက်များသည်ပုံရိပ်ကိုမိမိကိုယ်မိမိဖြစ်စေသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုဖြစ်စေ၊ ကြီးကျယ်သောလူထုအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အရှက်ရခြင်းမှစိတ်ကျန်းမာရေးပြandနာများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းအထိအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကနေဒါမှ ၁၅ နှစ်အရွယ်အမန်ဒါကဲ့သို့ပင် Todd (ဝံပုလွေ, 2012) ။ အထူးသဖြင့်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုမြင့်တက်လာသည့်အခါဆယ်ကျော်သက်များတွင်စွန့်စားမှုအပြုအမူများပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများတိုးများလာသည်။Blakemore & Robbins, 2012). Horvath et al ။ ၏ (2013) သက်သေအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်မှုဆယ်ကျော်သက်အကြားပိုမိုချဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောတိုးမြှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူများညွှန်ပြ။ Valkenburg နှင့်ပေတရု (2007, 2009, 2011အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းကဆယ်ကျော်သက်များကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၀၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အကြားလေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များကိုအကျဉ်းချုံးထားသည် Horvath et al ။ (၂၀၁၃) ထို့ကြောင့် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအတိအလင်းအွန်လိုင်းပေါ်မှရုပ်ရှင်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကအမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ပိုမိုရှုမြင်လာစေသည်။ လူငယ်များသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလိင်အရလက်တွေ့ကျသည်ဟုရှုမြင်ပါကပေါ့ပေါ့တန်တန် / ဟီဒန်ဆန်လိင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးများထက်လိင်မှုကိစ္စပုံမှန်သာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကလေးသူငယ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမရေရာမှုပိုမိုများပြားလာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများနှင့်တန်ဖိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မီဒီယာလေ့လာမှုများသီအိုရီများအရလိင်မှုကိစ္စသည်လိင်မှုကိစ္စပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့်အထူးသဖြင့် Pseudo- ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားဖြင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအနှောက်အယှက်များပြည့်နှက်နေခြင်းကြောင့်ကလေးသူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများရှိနေခြင်းကိုပိုမိုစိတ်ပျက်လာသည်ဟုအငြင်းပွားဖွယ်ရာအဆိုပြုထားသည်။ ဘရိုင်ယန်လိုစာရေးဆရာတွေ McNair (၂၀၁၃) ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ၊ တေးဂီတ၊ ဖက်ရှင်နှင့်ရုပ်ရှင်များသည်“ Porno Chic” နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်ဟုငြင်းခုံကြသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်စာရေးသူအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုပြင်းထန်လာသောအပူပိုင်းဒေသများသည်ကလေးငယ်များကစားသုံးခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းခံနေရသော“ pornosphere” မှတစ်ဆင့်သတင်းမီဒီယာများကိုပျံ့နှံ့သွားပြီဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးကလေးငယ်များကြည့်ရှုရန်အတွက်စံပြအခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်ရိပ်မိခံရခြင်းနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါအငြင်းအခုံနောက်ထပ်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ် Paasonen et al ။ (၂၀၀၇)သူကစောဒကတက်သည်မှာပုံမှန်ကလေးများအတွက်သာမန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပင်မမီဒီယာများ၏“ ညစ်ညမ်းမှု” ကြောင့်ပျက်စီးသွားသည်ဟုဆိုသည်။ McNair ၏အပြိုင်အငြင်းပွားမှုများနှင့် Paasonen et al ။ (၂၀၀၇) အွန်လိုင်းလူမှုမီဒီယာကွန်ယက်များနှင့်ဓာတ်ပုံမျှဝေသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော Pornosphere သို့မဟုတ် Pornogrification လုပ်ငန်းစဉ်၏ရှေ့ဆောင်တွင်ရှိသည့်အရွယ်ရောက်သူများထက်ကလေးငယ်များအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေသည်။
စာပေသည်“ sexting” (သို့) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းပြသသည်။ ယခုဆောင်းပါးသည်ယခုဆောင်းပါးအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိသုတေသနအတွက်အသက်အရွယ်အလိုက်သင့်တော်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးစမ်းသပ်မှုကိုအဆင့် (၁) တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်း (သို့) အွန်လိုင်းမှလိင်မှုပြုသူများ၏ရုပ်ပုံများကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းတွင်သင်အင်တာနက်မှကြည့်ရှု့ခြင်း (သို့) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကသင်နှင့်တိုက်ရိုက်မျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြသခဲ့ခြင်းများရှိတဝက်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းပုံရိပ်များနှင့်ရုပ်ရှင်ကားများပါဝင်သည်။
သုတေသနမေးခွန်း ၁: အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ကွဲပြားသောအသက်အုပ်စုများနှင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအကြားအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းတွင်သဘောထားများ၊ အပြုအမူများနှင့်စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကွဲပြားခြားနားမှုများရှိပါသလား။
သုတေသနမေးခွန်း ၁: အွန်လိုင်းမှအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုအပြီးတွင်ကလေးများနှင့်လူငယ်များ၏အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသနည်း။
သုတေသနမေးခွန်း ၁: အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များ၏ကိုယ်ပိုင်လိင်အပြုအမူကိုမည်မျှအတိုင်းအတာအထိသြဇာသက်ရောက်သနည်း။
သုတေသနမေးခွန်း ၁: အွန်လိုင်းမှအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအနေဖြင့်အွန်လိုင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအဘယ်အတိုင်းအတာအထိလွှမ်းမိုးနိုင်သနည်း။
မူလက NSPCC နှင့် OCC မှတာ ၀ န်ယူခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၅ နှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀၁၆ အစောပိုင်းတွင် Middlesex တက္ကသိုလ်မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များသူတို့အွန်လိုင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ပုံကိုအကြီးမားဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကျောင်းနှင့်မိသားစုဘောင်များကိုပုံဆွဲ။ အထူးစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်ကုမ္ပဏီသုတေသနအဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကလေးသူငယ်သက်သာချောင်ချိရေးကိုစုဆောင်းမှု၏ရှေ့တန်းမှ ဦး စားပေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်နောက်ထပ်အဆင့်များပြုလုပ်ခဲ့သည် (“ ကျင့်ဝတ်” ကိုကြည့်ပါ) ။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတစ်လျှောက်ရှိအသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အတွင်းရှိဆယ်ကျော်သက်ပေါင်း ၁,၀၇၂ ယောက်နှင့်အဆင့်သုံးဆင့်ရောနှောသောနည်းစနစ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တက်ရောက်သူများအတွက်ကွင်းဆင်းအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်အသက်အရွယ်သုံးခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် - ၁၁ မှ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ နှင့် ၁၅ မှ ၁၆ နှစ် - ။ အကြီးစားအရေအတွက်၊ အွန်လိုင်းစစ်တမ်း (အဆင့် ၂) ကိုအရည်အသွေးပြည့်ဝသောဖိုရမ်များဖြင့်စာအုပ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဆင့် ၁ နှင့် ၃ ရှိအာရုံစိုက်အုပ်စုများ (Creswell၊ ၂၀၀၉) ။ အွန်လိုင်းပုံစံဆွေးနွေးမှုများအတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အတွေ့အကြုံများ၏နက်ရှိုင်းမှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုတို့ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသောဒီဇိုင်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်၊Onwuegbuzie & Leech, 2005) ။ သုတေသနအဆင့်သုံးဆင့်တွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
အဆင့် ၁။ လူငယ်များ ၃၄ ယောက်နှင့်ပြုလုပ်သောအွန်လိုင်းဆွေးနွေးမှုဖိုရမ်နှင့်အွန်လိုင်းအာရုံစိုက်အုပ်စုလေးစု။ ဤအုပ်စုများကိုအသက်အရွယ်အလိုက်ခွဲခြားထားသော်လည်းကျားမခွဲခြားခြင်း (အမျိုးသမီး ၁၈ ဦး၊ အမျိုးသား ၁၆ ဦး) ရှိသည်။
အဆင့် (၂) ဗြိတိန်နိုင်ငံလေးနိုင်ငံတွင်အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သောအမည်မသိအွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခု။ လူငယ်တစ်ထောင်တစ်ဆယ့်ခုနစ် ဦး ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀၁ ကိုနောက်ဆုံးဆန်းစစ်ခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၄၇၂ (၄၇%) မှာအမျိုးသားများဖြစ်သည်။ ၅၂၂၊ (၅၂%) သည်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးနမူနာသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အရွယ်လူငယ်များကိုလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၊ လူမျိုးရေးနှင့်ကျားမခွဲခြားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အဆင့် ၃ - အွန်လိုင်းအာရုံစူးစိုက်သောအဖွဲ့ (၆) ခုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဤအုပ်စုများသည်အသက်နှင့်ကျားမအလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီးပါဝင်သူ ၄၀ (အမျိုးသမီး ၂၁ ဦး၊ အမျိုးသား ၁၉ ဦး) ရှိသည်။
အသက်အရွယ် - သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိကာပိုမိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သောမေးခွန်းအချို့ကိုအသက်အငယ်ဆုံးပါ ၀ င်သူများ (၁၁-၁၂ နှစ်) တွင်မသုံး ခဲ့၍ ဘာသာစကားသည်အသက်အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်အဆင့်သုံးဆင့်အကြားတွင် Delphi ပုံစံချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆင့်တစ်ဆင့်၏တွေ့ရှိချက်များကိုအချက်အလက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်စာပေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သုတေသနအဖွဲ့မှ၊ နောက်အဆင့်သို့လျှောက်လွှာ တင်၍ သံသရာ (Hsu & Sandford, 2007) ။ ထို့ကြောင့်, အဆင့်2နှင့်3လေ့လာမှုမှအတိုင်းအတာများ triangulation တစ်ခုဒြပ်စင်ထောက်ပံ့ (Denzin၊ ၂၀၁၂).
ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များကိုသုတေသန၏အဆင့်သုံးဆင့်မှလေ့လာဆန်းစစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆင့် (၁) နှင့် (၃) ကိုအုပ်စုလိုက် / ဖိုရမ်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာဖြင့်ရေးသားထားသောမှတ်တမ်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ Focus group ၏တွေ့ရှိချက်များကိုသရုပ်ခွဲခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာအလိုက်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စိစစ်ခဲ့သည်။Braun & Clarke, 2006; Smith & Firth, 2011).
သုတေသနအဆင့်သုံးဆင့်ကို Middlesex တက္ကသိုလ်ဥပဒေဥပဒေကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအတည်ပြုပြီးဗြိတိသျှလူမှုဗေဒအသင်း၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုနှင့်ညီသည်။ ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုယူကာအကာအကွယ်ပေးရေးအတွက်ဂရုတစိုက်သတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်ကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကောက်ယူခြင်းမရှိဘဲအွန်လိုင်းဖိုရမ်များ / အုပ်စုများတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ပထမအမည်များကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည် (ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားသောကလောင်အမည်) ကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့သည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမှတက်ကြွစွာစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ကြသည်။ ပါဝင်သူသတင်းအချက်အလက်စာရွက် (PIS) ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်နေသောဆယ်ကျော်သက်များအား၎င်းတို့၏မူလစောင့်ရှောက်သူ၊ ကျောင်းနှင့်အခြားတံခါးစောင့်များအားပေးခဲ့သည်။ လူငယ်များသည်သုတေသနတွင်ပါ ၀ င်ရန်လည်းသဘောတူပါက၊ လေ့လာမှု၊ မည်ကဲ့သို့ခွင့်ပြုချက်၊ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည်၊ ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့မပါဝင်မီထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြထားသည်။
online forum / focus အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သောဖြေဆိုသူများကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုစီ၏အစတွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမှထွက်ခွာနိုင်သည်ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းစစ်တမ်းတွင်ပုဒ်မခွဲတစ်ခုစီတွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကလစ် နှိပ်၍ ထွက်ခွာရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ပါသည့်ရုပ်သိမ်းသည့်စာမျက်နှာသို့ ဦး တည်သည်။
ဤကဏ္ section သည်အောက်ပါအဓိကနယ်ပယ်များမှကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း၏တွေ့ရှိချက်များကိုလေ့လာထားသည်။ အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်၊ ၁၃ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အတွင်းရှိယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအွန်လိုင်း (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) အပြာစာပေများကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကြည့်ရှုခြင်း၏အတိုင်းအတာကိုအစီရင်ခံရန်စစ်တမ်းအချက်အလက်များကိုရေးဆွဲထားသည်။ 11 မှ 12 နှင့်ဤအမျိုးအစားများအကြားကျား, မကွဲပြားမှု; တုန့်ပြန်သောဆယ်ကျော်သက်များသည်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရန် / အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ၏အကြမ်းဖျင်း၊ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကိုပထမအကြိမ်ကြည့်သောအခါတုံ့ပြန်သူများ၏တုံ့ပြန်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ နှင့်သူတို့၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုသူတို့၏ဘဝများနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအပေါ်ဖြေကြားသူများ၏သဘောထားတွင်မြင်သောအခါပြောင်းလဲလာသည်။ အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့်လူငယ်များ၏ကိုယ်ပိုင်လိင်အပြုအမူကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံသူများ၏အလားအလာရှိသောလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အပြုအမူများအပေါ်ထားရှိသည့်အတိုင်းအတာကိုဖော်ပြရန်အရည်အသွေးအဆင့်ဆင့်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
စစ်တမ်းက ၄၈% (n = ၄၇၆) အွန်လိုင်းမှအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီး၊n = 525) ။ တုန့်ပြန်ဖြေကြားသူအုပ်စုများများလေလေညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပိုမိုမြင်တွေ့နိုင်လေလေ (၁၅-၁၆ မှ ၆၅%၊ ၁၃-၁၄ မှ ၄၆% နှင့် ၁၁-၁၂ မှ ၂၈%) ။ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မြင့်တက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သိသာထင်ရှားတယ်။n အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောအသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အရွယ်လူငယ်များ (= ၂၄၈)n = 476) 14 နှစ်အားဖြင့်ကထိတွေ့ခံရ။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူ ၄၇၆ ဦး အနက် ၃၄% သည်n = 161) တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမြင်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ လူငယ် (၁၉) ရာခိုင်နှုန်းသာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် သင်တန်းသား ၄၇၆ ဦး မှအောက်ပါထုတ်ကုန်များ၌၎င်းတို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အိတ်ဆောင်ကွန်ပြူတာ (Laptop, iPad, Notebook, etc) မှ ၃၈%၊ လက်ကိုင်ကိရိယာမှ (၃၃%) (ဥပမာ iPhone, Android၊ Windows စမတ်ဖုန်း၊ Blackberry စသည်) ။ desktop ကွန်ပျူတာမှ Mac (PC, etc) မှ ၂၄%၊ ဂိမ်းကစားရာမှ ၂% (ဥပမာ - Xbox, PlayStation, Nintendo စသည်) ။ 19% ပြောဖို့မပိုနှစ်သက်နေစဉ်။ နမူနာ၏ထက်ဝက်အောက် (၄၇၆ / ၄၈%) သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်၊n = 209) ၎င်းကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းကိုမကြည့်ဘဲတက်ကြွစွာရှာဖွေခြင်းမပြုဘဲထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုတွေ့မြင်ခဲ့သူထက်ဝက်ခန့်ကိုပြန်ထားခြင်း - ဥပမာအားဖြင့်မလိုချင်သော pop-up မှတစ်ဆင့်ရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး မှပြခြင်း / ပို့ခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယောက်ျားလေး (၅၆%) သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမိန်းကလေးများ (၄၀%) ထက်ပိုများကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကျားမကွဲပြားမှုသည်လိင်အရအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို ၅၉% ဖြင့်ရည်ရွယ်သည်။n = 155/264) သတင်းပို့သောအမျိုးသားများအနက် ၂၅% သာလျှင် (n အမျိုးသမီး = 53/210); နှင့် 6% (n = 28 /n = 1,001) ဟုပြောဖို့မပိုနှစ်သက်။
ဦး တည်အုပ်စုများအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများရှာဖွေခြင်းနှုန်းနှင့်ကျား၊ မကွဲပြားမှုအလားအလာများကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။ အဆင့် ၁ နှင့် ၃ မှအရည်အသွေးရှိသောတွေ့ရှိချက်များသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော (အွန်လိုင်းအဆင့် ၁ မေးခွန်းလွှာမှ) အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမျိုးသားဖြေကြားသူများ၏ဘုံအဖြေမှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဟာသအဖြစ်။ (အမျိုးသား၊ ၁၄ နှစ်)
ဟုတ်ပါတယ်၊ (အမျိုးသား၊ ၁၃ နှစ်)
ပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုခြင်းအပေါ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်လက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုတုံ့ပြန်မှုအစကန ဦး မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသူ ၄၇၆ ယောက်နှင့်လက်ရှိကြည့်ရှုသူ ၂၂၇ ဦး ၏ကွဲပြားမှုကိုဖော်ပြထားသည်။ ဇယား 1 နှင့် 2.
စားပွဲတင် 1 ။ လက်ရှိခံစားချက်များ။
စားပွဲတင်2။ ကန ဦး ခံစားချက်များ။
ဤတွေ့ရှိချက်များကိုနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်မီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနေသောဆယ်ကျော်သက်များနည်းပါးကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေတုန်းသတင်းပို့သူများအနက်သိလိုစိတ်က ၄၁% မှ ၃၀% သို့တုန့်ပြန်သည်ဟုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာသည်နှင့်အမျှယင်းသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အခြားဆိုးကျိုးများမှာအလွန်ရောနှောပြီးပထမကြည့်ခြင်းနှင့်လက်ရှိတုံ့ပြန်မှုများအကြားအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားသည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများ၏ ၂၇% မှ ၈% သို့ကျဆင်းသွားသည်။ "ရှုပ်ထွေး" 41% မှ 30%; "ရွံရှာဖွယ်" 27% မှ 8%; "ဦး နှောက်အာရုံကြော" 24% မှ 4%; "နေမကောင်း" 23% မှ 13%; "ကြောက်တယ်" 21% မှ 15%; နှင့် "စိတ်ဆိုး" 11% မှ 7% ။
အပျက်သဘောစစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှုများကိုအဆင့် ၁ နှင့် ၃ တွင်ဖော်ပြထားသောအောက်ပါဖော်ပြချက်များဖြင့်အားဖြည့်ထားသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ - အခြားအချိန်များ။ (အမျိုးသား၊ ၁၃ နှစ်)
ဗွီဒီယိုတွေမှာသူတို့ပြုမူပုံကြောင့်မသက်မသာဖြစ်မှုအနည်းငယ်။ (အမျိုးသား၊ ၁၄ နှစ်)
ကြည့်ရတာမကောင်းဘူး လိုပဲငါတကယ်မြင်နေမဖြစ်သင့်။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၄ နှစ်)
ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက်များကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်သည်။ ပထမ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပထမအကြိမ်ကြည့်ခြင်းအပေါ်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်မှုရှိသောဆယ်ကျော်သက်အချို့သည် ထပ်မံ၍ မတွေ့ရရန်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများလှမ်းသည် (ထို့ကြောင့်လက်ရှိကြည့်ရှုသည့်ဒေတာတွင်မပြပေ။ ) ဒုတိယအချက်မှာအချို့သည်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်တွေ့ရသောအရာများအပေါ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်လာခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်ရှုထောင့်များကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအယူအဆများသည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သီးသန့်သီးခြားဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ ဖိုရမ် / ဦး တည်အုပ်စုများမှမြီးကောင်ပေါက်များ၏ဖော်ပြချက်အချို့သည်ဤယူဆချက်များကိုထောက်ခံရန်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ကျိန်းသေကွဲပြားခြားနားသည်။ အစပိုင်းမှာတော့ဒါကကျွန်မကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားစေနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်မီဒီယာနဲ့ဂီတဗီဒီယိုတွေမှာလိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုတိုးချဲ့အသုံးပြုမှုကြောင့်ငါအဲဒါကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်၊ (အမျိုးသမီး၊ ၁၃-၁၄)
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကတော့ထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ဘာကိုစဉ်းစားရမှန်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ပုံမှန်ပါပဲ။ လိင်ကိုတားမြစ်ထားသည်မဟုတ်။ (အမျိုးသား၊ ၁၃-၁၄)
အစပိုင်းမှာတော့ကြည့်ရတာပုံမှန်မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေကဒါကိုကြည့်ခြင်းအကြောင်းပြောကြတယ်။ ဒါကြောင့်အခုကြည့်ရတာမကောင်းဘူး။ (အမျိုးသား၊ ၁၅-၁၆)
ဇယား 1 နှင့်2ထို့အပြင်အွန်လိုင်းမှရှင်းလင်းသောအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုများ၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိသည့်တုံ့ပြန်မှုများကိုလည်းပြသသည်။ 17% မှ 49% "စိတ်လှုပ်ရှား"; 11% မှ 23% "ပျော်ရွှင်"; နောက်ဆုံး၌ "sexy" ၄% မှ ၁၆% အထိရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးမှုတွင်ဤအချက်အလက်များသည်စာရင်းအင်းအရထူးခြားသောအပြောင်းအလဲများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ ဖွင့်ထားခြင်း” ကိုပထမဆုံးဖွင့်ခြင်းနှင့်“ ဖွင့်ထားခြင်း” ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကမူလဖွင့်ခြင်းကိုအကြောင်းကြားခြင်းမရှိသောမြီးကောင်ပေါက် ၅၅ ယောက်ကမူဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့ကြသည်။2(1, N = 227) = 44.16, p <.01, ဖိ = .44 ။ သို့သော်လက်ရှိကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ဖြေကြားသူများ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုစမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့်မူလဖွင့်မဖွင့်လှစ်သောလူငယ် ၂၀၇ ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆက်လက်မြင်တွေ့နေရကြောင်းအစီရင်ခံခြင်းမရှိသေးပါ၊2(1, N = 476) = 43.12, p <.01, ဖိ = .30 ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်းဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခံစားခြင်းထက်ရှောင်ကြဉ်ခဲ့သည်။
ဖြေကြားသူများအား၎င်းတို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအများစုကို ၅ မျိုးပါသော Likert-type စကေးကို အသုံးပြု၍ မတူညီသောခံစားချက် / အမျိုးအစား ၁၄ ခုအရအကဲဖြတ်ရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ရလဒ်များမှာအလွန်ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချိုးကျတုံ့ပြန်မှုသည်လက်တွေ့မကျပါ။ ၄၉% ကဤအကဲဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူကြကြောင်း၊ သို့ရာတွင်လူငယ်များသဘောတူလက်ခံထားသည့်အခြားဖော်ပြချက်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်“ နှိုးဆွခြင်း” (၄၇%)၊ “ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ” (၄၆%) နှင့်“ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်” (၄၀%) တို့ဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားများသည်တစ်ခုချင်းစီကိုသီးသန့်သီးသန့်မထားနိုင်ကြောင်းနှင့်လူငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းတို့ရှုမြင်သောအရွယ်ရောက်သူအကြောင်းအရာများအားနှိုးဆွခြင်းနှင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းများလုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိရသင့်သည်။
အချို့သောမြီးကောင်ပေါက်များသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုတွန်းလှန်ရန်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောအသိအမြင်ကိုကြည့်ရှုသူ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းက“ မိုက်မဲ” နှင့် ၃၄% သည်“ ရယ်စရာ” ဖြစ်သည်ဟုဒေတာများမှကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုစလုံးသည်“ ရွံရှာဖွယ်ရာ / ရွံရှာဖွယ်ရာ” ၃၀%၊ “ ကြောက်စရာကောင်းသော” ၂၃% သို့မဟုတ်“ စိတ်ပျက်စရာ” ၂၁% နှင့် ၂၀% တို့က“ ပျင်းစရာကောင်း” ဟုတုံ့ပြန်မှုများထက်သာလွန်သည်။ သို့သော်ယောက်ျားလေးများသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ဆက်ဆံမှု၏အဖြစ်မှန်များအကြားယောက်ျားလေးများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းရှိ၊
၎င်းသည်လူတို့အားလိင်အကြောင်းသင်ကြားခြင်းနှင့်မည်သို့မည်ပုံသင်ပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လူတို့အားလိင်နှင့်ပတ်သက်သောနားလည်မှုအတုကိုသင်ပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ ဤဗီဒီယိုများတွင်တွေ့ရသောအရာသည်အစစ်အမှန်ဘဝ၌ဖြစ်ပျက်သောအရာမဟုတ်ပါ။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၄ နှစ်)
ဟုတ်ကဲ့၊ စအိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သောမကောင်းသောအရာများကိုလေ့လာနိုင်သည်။ ထို့နောက်ယောက်ျားလေးအချို့သည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၃ နှစ်)
သတိပြုသင့်သည်မှာအာရုံစူးစိုက်သောအဖွဲ့များသည်ပြbehaviorနာဖြစ်ပွားနေသည့်အပြုအမူများအားအမှန်တကယ်မြင်ခြင်း (ကြားခြင်း) ၏သက်သေအထောက်အထားအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ တစ် ဦး တည်းသာဖြေဆိုသူကြောင်းညွှန်ပြ
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဗီဒီယိုမှာသူမြင်ခဲ့သလိုပဲအဓိကမဟုတ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီမှာစတင်ရိုက်ခဲ့တာ။ (အမျိုးသား၊ ၁၃ နှစ်)
စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်တွေ့ရသောအရာများကိုစမ်းသပ်နိုင်သည့်အယူအဆသည်အုပ်စုကြီးများနှင့်အွန်လိုင်းအာရုံစိုက်အုပ်စုများတွင်မကြာခဏပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် (၁၃-၁၄; ၁၅-၁၆) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုမေးမြန်းသောအခါ
လူတွေဟာအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (အမျိုးသား၊ ၁၃ နှစ်)
လူများသည်သူတို့မြင်သောအရာကိုကူးယူရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၁ နှစ်)
၎င်းသည်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့မကျသည့်အမြင်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမိမိကိုယ်ကိုသတိပြုစေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကိုမြင်ရသည့်အရာကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်များသည်အဘယ်ကြောင့်မဖွံ့ဖြိုးသေးသည်ကိုမေးခွန်းထုတ်သည်။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၃ နှစ်)
အပေါ်တင်ပြအဖြစ်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုလည်းအွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာမှပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ဇယား3နှင့် 4.
စားပွဲတင်3။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကငါ့ကိုစမ်းကြည့်ဖို့လိင်အမျိုးအစားများအကြောင်းအကြံဥာဏ်များပေးခဲ့သည်။
စားပွဲတင်4။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေသည်လိင်အမျိုးအစားများကိုလေ့လာရန်လိင်အမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များပေးသည်။
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာထင်ရှားသောအသက်ကွာခြားမှုကို“ သင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံသည်သင်စမ်းချင်သောလိင်အမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးများပေးခဲ့သလား” ဟူသောမေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ ၄၃၇ ဦး တွင်အသက် ၁၅ မှ ၁၆ နှစ်ရှိလူငယ် ၉၀ (၄၂%) တို့ကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကိုတားဆီးလိုသည့်စိတ်ကူးများကိုပေးခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်အုပ်စု ၅၈ ဦး (၃၉%) နှင့် ၁၁ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အရွယ်အုပ်စု ၁၅ စု (၂၁%) တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်သဘောတူခွင့်ပြုချက်သက်ရောက်သည်နှင့်အမျှလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးတွင်လူငယ်များသည်ဤအယူအဆကိုသဘောတူသူများထံမှထောက်ခံခြင်းမပြုခဲ့ကြပေ။
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသည့်ကျားမကွဲပြားမှုများကိုလည်းတူညီသောမေးခွန်းအတွက်ဖြေဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသားများ၏ ၄၄% (၁၀၆/၂၄၁) ကအမျိုးသမီးများရဲ့ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း (၅၆/၁၅) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့တွေ့ခဲ့သည့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကသူတို့ကြိုးစားချင်သောလိင်အမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေးအခေါ်များပေးသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်ကိုအနက်ဖွင့်သည့်အခါသတိပြုရန်မှာပညာရှိရာရောက်သည်။ အထူးသဖြင့်လူငယ်များ၏ယုံကြည်မှုများနှင့်သုတေသနတွင်မည်သို့ဖော်ပြခဲ့ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ လိင်မှုကိစ္စစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းတွင်ကျား၊
အဆင့် (၃) မှ ဦး တည်အုပ်စုလိုက်တွေ့ရှိချက်များသည်ဤအချက်အလက်များနှင့်အကျုံး ၀ င်သည်။ အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသောမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုသိသနည်းဟုဖြေဆိုသူအမျိုးသားများအားမေးမြန်းသောအခါ၊
ဟုတ်တယ်။ သူမသည် kinky အရာများကိုကြိုးစားရှာဖွေခဲ့သည်။ အိပ်ရာနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ (အမျိုးသား၊ ၁၃ နှစ်)
ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ (အမျိုးသား၊ ၁၄ နှစ်)
မေးခွန်းကပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်လာတဲ့အခါ (“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာမင်းမြင်ဖူးသမျှတစ်ခုခုကိုကြိုးစားပြီးစဉ်းစားမိသလား?”) ဖြေဆိုသူအများစုကကန့်ကွက်ကြသည်။
ရံဖန်ရံခါ - ဟုတ်တယ်။ (အမျိုးသား၊ ၁၃ နှစ်)
ငါ့ကိုစဉ်းစားလုပ်ပေမယ့်တကယ်တော့မကျင့်။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၃ နှစ်)
ငါနဲ့ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကြိုက်ခဲ့ရင်ငါတို့ကပိုလုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ကဒါကိုမကြိုက်ရင်ဆက်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ (အမျိုးသား၊ ၁၅-၁၆)
အွန်လိုင်းစစ်တမ်းဇာတ်စင်နှစ်ခုတွင်မေးမြန်းသောအခါ၊ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတွေ့မြင်ပါက“ ။ ။ ။ ငါ့ကိုယုံကြည်ဖို့ငါ့ကိုခေါ်သွားတယ် အမြိုးသမီးမြား လိင်မှုပြုခြင်းတွင်အချို့သောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုမူသင့်သည်” ဟုဖြေကြားချက် ၃၉၃ ခုမှ ၁၅ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ကြားရှိ ၁၆% သည်သဘောတူထားခြင်း၊ လုံးဝသဘောတူခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၁၃ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းကမူလက်ခံခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၁၆) နှစ်ကြားလူငယ် (၅၄) ရာခိုင်နှုန်းသည်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုသဘောမတူ / လုံးဝသဘောမတူညီ၊ ၁၃ မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ၄၀% သည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရှုခြင်းရှိ၊ ။ ။ လိင်မှုပြုစဉ်အမျိုးသားများသည်အချို့သောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုမူသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်စေခဲ့သည်။ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်သဘောတူထားခြင်း၊ လုံးဝသဘောတူခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၁၃ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းကမူပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၁၆) နှစ်ကြားလူငယ် (၅၄) ရာခိုင်နှုန်းသည်ဤဖော်ပြချက်ကိုသဘောမတူ / လုံးဝသဘောမတူညီကြပြီး၊ ၁၃ မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ၄၀% (ထပ်မံ၍ ၃၉၃ ဦး ကဖြေဆိုခဲ့သည်) ။
ဤတွေ့ရှိချက်များကဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကာလအတွင်းမျှော်လင့်ထားသည့်အပြုအမူများအကြောင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများမှအကြံဥာဏ်များကိုသက်သေထူသည်။ ဒေတာကကျွန်ုပ်တို့အားမဖော်ပြနိုင်သည့်အချက်သည် ၄ ​​င်းတို့နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအယူအဆများသည်လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ထောက်ထားစာနာမှုရှိသော၊ (သို့) အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းစွာပြုခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ဤနေရာတွင်လည်းသူတို့၏အတွေးအမြင်များသည်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူပြောင်းလဲလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်၊ ထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်များနှင့်အညီ၊ အသက်အငယ်ဆုံးအုပ်စုလိုက် (၁၅-၁၆) သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၏လိင်မှုပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမည်သို့ပြုမူသင့်သည်ဟူသောပုံသဏ္onာန်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့နည်းသွားသည်၊ နှင့်အမျိုးသားများအတွက် -15% ။
အွန်လိုင်းဖိုရမ်နှင့်အာရုံစိုက်အုပ်စုများတွင်ပါဝင်သူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့ရသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ of အပေါ်ထားရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်များနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် -
ကောင်းပြီ၊ သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွင်ဘာတွေဖြစ်နေသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရပြီးသင်သည်အခြားလူမျိုးများနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မိသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသားများလွှမ်းမိုးထားသည့်အချစ်ဇာတ်လမ်းသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု - သို့မဟုတ်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားနှောင့်နှေးစေသည်။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၃ နှစ်)
သင်နှင့်အဆင်မပြေသောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖိအားပေးလိမ့်မည်။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၄ နှစ်)
သူတို့ (ယောက်ျားလေးများ) သည်ကွဲပြားသောလူတစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးယင်းသို့ပြုမူခြင်းနှင့်ပြုမူခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုစတင်စဉ်းစားလာကြသည်။ သူတစ်ပါးနှင့်စကားပြောဆိုပုံသည်လည်းပြောင်းလဲသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူတို့ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကဒါကိုပဲစဉ်းစားနေမိမှာပါ၊ ဒါကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှုမြင်ပုံကိုကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ (အမျိုးသား၊ ၁၄ နှစ်)
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုနေရာအနှံ့တွင်တွေ့နိုင်သည်မှာအလွယ်တကူမြန်ဆန်စေပြီးအလွယ်တကူထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ မျှဝေနိုင်သည်။ ဤနမူနာရှိလူငယ်အများစုသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိ၊ သို့သော်ဖြေဆိုသူ ၂၆% (၂၅၈ / ၁၀၀၁) သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေ / လင့်များကိုတောင်းခံသည်ဖြစ်စေမရရှိသည်။ ပိုမိုနိမ့်ကျသည့်အချိုးအစားများအရသူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်စုံတစ် ဦး ထံ ၄% (၄၀/၉၁၈) ဖြင့်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသုတေသီများကသတိပြုမိသော်လည်းအချို့သော“ ပေးပို့သူများ” သည်“ လက်ခံသူ” များထက်ယင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်တွန့်ဆုတ်နိုင်သည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်စိတ်နှိမ်နင်းခြင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောဓာတ်ပုံများသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်တရား ၀ င် ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း (သို့) လက်ခံခြင်းတို့သည်တရားမ ၀ င်သော်လည်းဆယ်ကျော်သက်သူငယ်ချင်းများအနေဖြင့်ဤအမှုများကိုတရားစွဲဆိုခြင်းသည် CPS ၏မူဝါဒမဟုတ်ပါ (CPS၊ ၂၀၁၈) ။ သို့သော်“ sexting” သည်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ထုတ်ပြန်ချက်များကြောင့်မီးမောင်းထိုးပြသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မီဒီယာတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
လူငယ်များနှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် sexting သည်သူတို့၏သက်တူရွယ်တူအုပ်စုတွင်အပြုအမူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပို၍ တူသည်ဟုခံစားရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ (Weale၊ ၂၀၁၅)
အွန်လိုင်းအာရုံစိုက်အုပ်စုများတွင်မှတ်ချက်ပေးသောဆယ်ကျော်သက်များသည်“ sexting” ကိုအခြားသူများသို့မဟုတ်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်များကိုအပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးပို့ခြင်းထက်သူတို့သိသောလူများနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသတင်းစကားများရေးသားခြင်း၊Jaishankar၊ ၂၀၀၉) ။ အမှန်မှာ၊ ဆယ်ကျော်သက်များသည်“ dodgy-pix”,“ nudes” သို့မဟုတ်“ nude-selfies” စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများအစားအမြင်အာရုံအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော nomenclature ကိုအသုံးပြုသည်ဟုစောဒကတက်ကြသည်။Weale၊ ၂၀၁၅).
အဆင့် (၂) အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကဆယ်ကျော်သက်အများစုသည်အဝတ်အချည်းစည်းမရှိသောမိမိကိုယ်ကိုပုံဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်ကိုဥရောပနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံမှလူငယ်များနှင့်ပြုလုပ်သောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှထောက်ခံခဲ့သည် (Webster et al ။ , 2014) ။ လက်ရှိစစ်တမ်းတွင်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေး ၁၃၅ ယောက်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကို topless ပုံများထုတ်လုပ်ခြင်း (ဖြေကြားသူ ၉၄၈ တွင် ၁၃%) နှင့် ၂၇ (ဖြေဆိုသူ ၃%) သည်သူတို့၏ကိုယ်ကိုအချည်းနှီးဓါတ်ပုံများရိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အလားအလာကောင်းသည့်အချက်မှာအဝတ်အချည်းစည်း (သို့) Seminaked images (၇၄/၁၃၅ (သို့) ၅၅%) ထုတ်လုပ်သူထက်ဝက်ကျော်ခန့်သည်ရုပ်ပုံများကိုအခြားသူတစ် ဦး အားကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ အွန်လိုင်းသို့ပို့ခြင်းအားဖြင့်မျှဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ကိုယ်သူတို့အပြည့်အဝအဝတ်အချည်းစည်းပုံရိပ်ယူပြီးတင်ပြသူများသည်နမူနာတစ်ခုလုံး၏ ၃% အောက် (၂၇ / ၁၀၀၁) ကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ပုံများကိုမျှဝေခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်စစ်တမ်းသည်ဖြေဆိုသူများအားလည်းမေးမြန်းခဲ့သည် အဘယ်ကြောင့် သူတို့ကိုယ်၌အချည်းစည်းနှင့် seminaked ဓာတ်ပုံများကိုဖန်တီး? ၆၉ ရာခိုင်နှုန်း (၉၃/၁၃၅) က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း (၂၇/၁၃၅) ကမလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းတို့ကိုလုပ်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကိုယ်အင်္ဂါချွတ်ယပ် / အပွင့်ပွင့်များကိုဆယ်ငါးပုံတစ်ပုံစီဖြင့်ပြင်ပဖိအားများသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးမှုများခံစားရပုံရသည်။
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်အဝတ်အချည်းစည်း (သို့) တစ်ပိုင်းတစ်စအဝတ်မဝတ်ဘဲကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သည့်ဓါတ်ပုံများကိုရိုက်ယူခဲ့ကြသော (၄၉/၁၃၅) ဓာတ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းမှတစ်စုံတစ် ဦး အားပြသရန်တောင်းဆိုခံရကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ပုံများပြသသူကိုသူတို့သိသလားမေးကြသောအခါပုံရိပ်ဝေမျှသူ ၆၁% (၃၀/၄၉) ကဤပုံများသည်များသောအားဖြင့်ကလေးသူငယ်ထုတ်လုပ်သူ၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဒေသတွင်းရှိနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုဖြေဆိုခဲ့သည် (၃၀/၄၉) ။ အနည်းဆုံးကန ဦး ရည်းစား / ရည်းစား။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက် ၂၅ ဦး (နမူနာ၏ ၂.၅%) က၎င်းတို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်တစ်ခုသို့ပို့လိုက်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျယ်ပြန့်။
ဖြေဆိုသူများအနေဖြင့်အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောကိုယ်ခန္ဓာ၏ပုံများသို့မဟုတ်သူတို့သိထားသောတစ်စုံတစ် ဦး ၏ရင်းနှီးသောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတွေ့ဖူးသလားဟုမေးမြန်းသောအခါ ၇၃ (ဖြေကြားသူ ၈%) သည်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ၏ပုံကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး ၁၅% (၁၄၄/၉၆၁) က သိကျွမ်းသူ ၃% (၃၁/၉၆၁) သည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ပုံနှင့် ၈% (၇၇/၉၆၁) သည်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုသိထားသူများဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းဖိုရမ်များ / ဦး တည်အုပ်စုများတွင်မြီးကောင်ပေါက်အများစုသည်အွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်သို့အဝတ်အချည်းစည်းရှိသော“ selfie” ကိုပေးပို့ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းတီထွင်ဆန်းသစ်သောဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုများကိုသက်သေပြနေပုံရသည် -
သင့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပျက်သွားလိမ့်မည် (အမျိုးသား၊ ၁၄ နှစ်)
သူတို့ကသိမ်းနိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တရားမ ၀ င်သော်လည်းသင်၏အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုဖြန့်ဝေခြင်းဟုသတ်မှတ်သည်။ (အမျိုးသား၊ ၁၃ နှစ်)
သင်တစ်ကြိမ်ပေးပို့လိုက်သည်နှင့်သင်၌ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါ။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၃ နှစ်)
အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုလူတစ် ဦး ဦး ထံပေးပို့လျှင်ကျောင်းတစ်ခုလုံးကိုနောက်တစ်နေ့တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ (အမျိုးသမီး၊ ၁၆ နှစ်)
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက် (၁၁) နှစ်မှ (၁၆) နှစ်ကြားယူကေရှိဆယ်ကျော်သက်များသို့ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းအဆင့်သုံးဆင့်မှတွေ့ရှိချက်များကိုအသက် ၁၄ နှစ်မှ ၂,၃၁၅ ဦး ရှိသူ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းကတွေ့ရှိခဲ့သောကလေးသူငယ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းကာကွယ်မှုအဖွဲ့ (CEOP) ၏မကြာသေးမီကထုတ်ဝေသောအဓိကသုတေသနလေ့လာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၂၄ ယောက်သည်မိမိကိုယ်ကိုအချည်းနှီးသို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားသောတစ်စုံတစ် ဦး ထံပေးပို့ခဲ့ကြပြီး ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာအမျိုးသားများ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာအမှတ်အသားရှိသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုအသက် (၁၄) နှစ်မှ (၁၇) နှစ်အရွယ်ကလေးများသာပါ ၀ င်ရန်စီစစ်ပြီးသောအခါပုံရိပ်ကိုပေးပို့သောသက်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများမှာ ၂၆% ဖြစ်ပြီး ၄၈% ကပေးပို့သူတစ် ဦး ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။McGeeney & Hanson, 2017).
လူငယ်များ၏လိင်အင်္ဂါနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုလိင်အင်္ဂါအ ၀ တ်အလှည့် / ထုတ်လွှတ်သောပုံများကိုယူခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်း၏လှုံ့ဆော်မှုများသည်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုမှတစ်ဆင့်လိင်ဆန္ဒများအပါအ ၀ င်မတူညီသောလွှမ်းမိုးမှုများစွာပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး သည် Amanda Todd အဖြစ်အပျက်တွင်ကဲ့သို့ "sextortion" သို့ပို့ဆောင်နိုင်သောဆယ်ကျော်သက်များထံမှရုပ်ပုံများကို inveigle ပြုလုပ်ရန်အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး သည် avatar ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လှည့်စားခြင်း။ဝံပုလွေ, 2012) ။ ပုံများလဲခြင်းသည်ကလေးသူငယ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (CSA) နှင့်ထိတွေ့ရန်၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်များနှင့်အညီတွေ့ဆုံရန်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုတွင်အွန်လိုင်းကလေးသူငယ်များကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်နည်းဗျူဟာလည်းဖြစ်သည်။Martellozzo & ဂျိန်း, 2017) ။ အချို့သောမြီးကောင်ပေါက်များသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာပြသခြင်းကိုအွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာလုပ်လိုကြပြီးအလွန်တူညီသည့်လှုံ့ဆော်မှုမှာခိုင်မာသည့်ဆက်ဆံရေးမိတ်ဖက်များနှင့်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှီးနှောဖလှယ်မှုများကို“ သီးသန့်” ဖလှယ်ခြင်းဖြစ်သည် (Martellozzo & ဂျိန်း, 2017).
ဒီလိုအန္တရာယ်များတဲ့လိင်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာခေတ်သစ်စျေးကွက် - စမတ်ဖုန်းများပြည့်နှက်နေခြင်း၊ မီဒီယာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များကိုလူမှုရေးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအလယ်အလတ်တန်းစားလောကထဲသို့ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းစသည့်အချက်များ - ဖြစ်နိုင်သည်။ ယဉ်ကျေးမှု "Pornification" သို့မဟုတ် "Pornogrification" နှင့်အတူပြည့်နှက်စေခြင်းငှါ (Allen & Carmody, 2012; McNair၊ ၂၀၁၃; Paasonen et al ။ , 2007) ။ သတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့်ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်“ selfie-nation” တွင်နေထိုင်သည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယူဆထားကြပြီး၊ Ofcom မှထုတ်ပြန်သောစစ်တမ်းအချက်အလက်များအရအရွယ်ရောက်သူ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အနည်းဆုံး selfie တစ်ချောင်းယူပြီး ၁၀% သည်တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး ၁၀ ကြိမ်သောက်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။စာနယ်ဇင်းအသင်း, 2015) ။ မိမိကိုယ်ကိုထုတ်လုပ်သည့်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုပေးပို့ရန်ရည်းစားများ / မိန်းကလေးများမှဖိအား / အတင်းအကျပ်ပြုမှု၏အခန်းကဏ္ also ကိုလည်းဤဖြစ်စဉ်တွင်အသိအမှတ်ပြုရန်လိုသည်။ ဆန္ဒအလျောက်ပုံများပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်လှည့်စားခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ထားသည့်လက်ခံသူထံမှလိမ်လည်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဤသုတေသနကပြသထားသည့်အတိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များ၏လိင်၊ ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးနှင့်သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်မည်သို့ရှုမြင်ပုံကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏သင်တန်းကာလအတွင်းအချို့သောကလေးများနှင့်လူငယ်များသည်ပညာရေးနှင့် (သို့) မလိုအပ်သောပစ္စည်းများလက်လှမ်းမီမှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အကူအညီနှင့်အကူအညီများကိုအတိအလင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းမှကာကွယ်ရန်ခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းအချို့လိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အစိုးရသည်လူငယ်များ၏အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမသင်မနေရအသက်စစ်ဆေးခြင်း (AV) စတင်ခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်ရန်အစီအစဉ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းအတွက်တရား ၀ င်အခြေခံကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၇ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမကြာသေးမီကအပိုင်းသုံးဆင့်တွင်) ဖော်ပြထားသည်။DCMS၊ ၂၀၁၆) ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအတွက်အသက်အရွယ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးသောဗြိတိသျှရုပ်ရှင်အဖွဲ့ခွဲ (BBFC) သည်အစိုးရသစ်အတွက်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ထားသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ မူဝါဒအသစ်သည် noncompliant sites များနှင့်ဆက်ဆံမှုအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ရန်ခြိမ်းခြောက်သည့်ငွေပေးချေသူများနှင့်ကြော်ငြာရှင်များမှတစ်ဆင့်အဓိကအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်; ဥပမာအားဖြင့်၊ အသက်စစ်ဆေးမှုကိုမိတ်ဆက်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည့်ညစ်ညမ်းထုတ်ဝေသူများ၊ BBFC အနေဖြင့်ကလေးသူငယ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများပါ ၀ င်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ရန်အခွင့်အာဏာပေးခဲ့သည်။Tempterton၊ ၂၀၁၆.
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပထမဆုံးသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ“ ညစ်ညမ်းသောပိတ်ဆို့ခြင်း” ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးအချိန်တွင်အစိုးရသည်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အသက်စစ်ဆေးမှုစတင်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေနိုင်ပြီး၊Waterson၊ ၂၀၁၉) ။ ယခုအချိန်အထိယူကေအစိုးရသည်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသောအစီအမံကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်ရန်ပေါင် ၂ သန်းသုံးစွဲခဲ့သည်။Hern၊ ၂၀၁၉) ။ သို့သော်ဒီသတင်းကိုပေးပို့ရာတွင်ဒီဂျစ်တယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ မီဒီယာနှင့်အားကစား ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၀ န်ကြီးနီကီမော်ဂန်အမတ် (ယခု Baroness) ကအစိုးရ၏ဤinရိယာ၌ပေါ်လစီများနှင့်ကျယ်ပြန့်သောအမြင်များတွင်သူကမျှော်လင့်ထားသည်မှာ -
ယူကေသည်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သူဖြစ်လာသည်။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏သုံးစွဲသူများ၏လုံခြုံမှုကိုတိုးတက်စေရန်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုရယူသုံးစွဲခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတွင်အသက်စစ်ဆေးခြင်းကိရိယာများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့အားအွန်လိုင်းကလေးများအားကာကွယ်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ (Johnston, 2019)
နှောင့်နှေးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပေမယ့်ကြောင့်အရေးကြီးသည် မလွယ်သေးဘူး ကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုမလိုအပ်သောထိတွေ့မှုများမှကာကွယ်ရန်ထိရောက်စွာအသုံးပြုသည်။ ယခုကိစ္စကိုယူကေအစိုးရများ၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော Online Harms White Paper အောက်တွင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။Gov.co.uk၊ ၂၀၁၉):
၎င်းအစား၊ အစိုးရအနေဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော Online Harms White Paper တွင်ကလေးသူငယ်များကိုကာကွယ်ရန်အစီအမံများကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ ဤသည်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုဒ်များသာမကဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုင်များတွင်ဂရုစိုက်ရန်တာ ၀ န်ယူရမည့်စည်းမျဉ်းအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်မျှော်လင့်ရသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၂ ကလေးသူငယ်များနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကလေးသူငယ်များနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအက်ဥပဒေအောက်တွင်လိင်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံမှု / စာတတ်မြောက်ရေးအတွက်အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်ရှိကျောင်းအားလုံးတွင်မသင်မနေရဆက်ဆံမှုနှင့်လိင်ပညာရေး (RSE) ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်ပြင်ဆင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည် လိင်မှုကိစ္စရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအွန်လိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အချိန်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေအတွက် သို့သော်၊ ဤဥပဒေသည်အင်တာနက်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုအတိအလင်းရည်ညွှန်းခြင်းမရှိသော်လည်းကျောင်းများသည်အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထို့အပြင်ယူကေကလေးသူငယ်အင်တာနက်အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကောင်စီ (UKCCIS) ပညာရေးအဖွဲ့သည်မိဘများနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများပါ ၀ င်သည့်ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်အလေ့အကျင့်များကိုကျောင်းများအားအထောက်အကူပြုရန်နှင့်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုချမှတ်ခဲ့သည် (UKCCIS၊ ၂၀၁၇) ။ ဒီဂျစ်တယ်ပေါ်လစီမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သောစက်မှုလုပ်ငန်းစံအများပြည်သူရရှိနိုင်သောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (PAS no1296) လည်းရှိသည်။Vigras၊ ၂၀၁၆“ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်” သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ) ။ သို့သော်စံကိုတရားဝင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်မရှိသေးပါ။
အစိုးရ၏အင်တာနက်လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာ (၂၀၁၈) အစိမ်းရောင်စက္ကူသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလတွင်တင်ပြခဲ့သောအကြံပေးချက်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်သုံးချက်ကိုတုန့်ပြန်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ပထမအချက်မှာယူကေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုံခြုံဆုံးနေရာဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေအသစ်များကိုတီထွင်ရမည်။ ဒုတိယအချက်ကအင်တာနက်လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာအကြံပေးမှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှု၊ တတိယအချက်မှာအစိုးရသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူလူထုနှင့်အတူ White Paper တွင်ပူးပေါင်းရန်ဖြစ်သည်။ ယခု Online Harms White Paper သည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အတွက်ပိတ်ထားပြီးယူကေအစိုးရ၏ပေါ်လစီရည်ရွယ်ချက်များသည်၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤလာမည့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအပေါ်နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။Gov.co.uk၊ ၂၀၁၉).
အသက်စစ်ဆေးခြင်းမလိုအပ်သောတရားစီရင်မှုနယ်မြေများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများပြသခြင်းကို TOR ကပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်1 (The Onion Browser) နှင့်အလားတူနည်းလမ်းများ (ဥပမာ၊ Virtual Private Networks [VPNs]) များကိုအမည်မသိ အသုံးပြု၍ အမှောင်ထုကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။2 ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအပါအ ၀ င်ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူလိုသောဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့၏အသက်ကိုငွေမပေး၊ အတည်ပြုခြင်းမပြုဘဲ၊ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ CSA ပုံများ၊ ထွက်။ (Chen က 2011) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်သည့်အနေဖြင့်ကျောင်းတွင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောပြtheနာများအားဆက်သွယ်ခြင်း (သို့) နိုင်ငံသားပညာရေးအနေဖြင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်အသက်အရွယ်အလိုက်သင့်လျော်သောအကြောင်းအရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ထို့ပြင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များကိုမထားနိုင်အောင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာများတည်ဆောက်ရန်မထားရှိပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် "ဆယ်ကျော်သက်များအခွင့်အရေးများ" ကိုအွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအသိအမြင်များနှင့်၎င်းတို့၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအွန်လိုင်းလုံခြုံရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် privacy နှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ။ လူငယ်များအရည်အသွေးကောင်းသောဆက်ဆံရေးပညာရေးနှင့်လိုအပ်သောနေရာတိုင်းရှိဒီဂျစ်တယ်စာတတ်မြောက်မှုလိုအပ်ချက်များသည် RSE သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကဲ့သို့သောအတားအဆီးများကြောင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အချို့သောကျောင်းများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (သို့) အခြားဆက်ဆံရေးအကြောင်းသင်ကြားရန်ငြင်းဆန်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာအသစ်များကိုတင်ပို့ရန်သတ်မှတ်ထားသောထိုဆရာ / မများ၏ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်၊ သို့မဟုတ်မိဘများသည်လက်ရှိဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှဘာသာရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအရသူတို့၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားရုပ်သိမ်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိ။ ထို့ကြောင့်မိဘများ၏အခွင့်အရေးကိုဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်၎င်းတို့၏အနာဂတ်ဘဝအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊
ဒေတာအစုအတွက်အနည်းငယ်ကန့်သတ်ထင်ရှားရှိကြ၏။ ပထမတစ်ခုမှာအသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အတွင်းရှိဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များကိုသာဖိတ်ကြားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ အသက် ၁၇ နှစ်နှင့် ၁၈ နှစ်အရွယ်လူငယ်များသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်သဘောတူခွင့်ရသည့်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိသဖြင့်၎င်းအားတရားဝင်ဖြစ်စေ၊ အသက် ၁၆ နှစ်အထိရှိသူများထက်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်အသက် ၁၁ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤသည်မှာအလယ်တန်းကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့်ဤဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကျင့် ၀ တ်နှင့်နည်းနာဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များသည်ဤစီမံကိန်း၏အတိုင်းအတာနှင့်အရင်းအမြစ်များထက်ကျော်လွန်နေသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သတိပြုရမည့်အချက်မှာကျောင်းတံခါးစောင့်များသည်မပါ ၀ င်သောကြောင့်နမူနာတွင်မြောက်အိုင်ယာလန်မှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အချိုးအစားမရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအများက Age Verification ပါ ၀ င်သည့် online Porn Block သည်၎င်းကိုအတုယူပြီးတိုးတက်စေရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုမြင်လိုကြသည်။ အချိန်၊ ငွေနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းမှုနှင့်အတူယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်လုံးလုံးလျားလျားပြိုလဲခြင်းကဆယ်ကျော်သက်များအားအွန်လိုင်းအန္တရာယ်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအချို့မှမေးခွန်းထုတ်စရာများမှမည်သို့ကာကွယ်နိုင်သည်ဟူသောမေးခွန်းကိုမေးခွန်းထုတ်စေသည်။ အသက်အရွယ်အလိုက်လိင်နှင့်ဆက်နွယ်သောပညာရေး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအချက်အလက်များပါ ၀ င်သောပညာရေးနှင့်ကလေးသူငယ်များအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသောသူများအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်မှာဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းကိုသုတေသနပြုခြင်း အွန်လိုင်းအန္တရာယ်ဒီရေ။
သုတေသနလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သောဒေါက်တာ Miranda Horvath နှင့် Dr. Rodolfo Leyva တို့သည်စီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံးသူတို့၏ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒေါက်တာ Miranda Horvath နှင့် Dr. Rodolfo Leyva တို့ကိုဤသုတေသနအတွက်ပံ့ပိုးမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
စာရေးသူ (များ) သည်ဤဆောင်းပါး၏သုတေသန၊ ရေးသားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက်အောက်ပါဘဏ္financialာရေးထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသုတေသနကို NSPCC နှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိကလေးများကော်မရှင်ရုံး (OCC) တို့ကထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
သုတေသနကို British Sociological Association ၏ကျင့် ၀ တ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစိတ်ပညာဌာနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
1.TOR - US စစ်တပ်မှအသုံးပြုသူများကိုခြေရာခံရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောယခုလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်သည့်စာဝှက်ထားသောဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ။
2.Dark Web တွင် TOR တွင်သာရနိုင်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်တရား ၀ င်တရားမ ၀ င်သောလျှို့ဝှက်ဝှက်ထားသောဝှက်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များပါဝင်သည်။ Deep Web တွင်ကုမ္ပဏီ၏ HR မှတ်တမ်းများ၊ ဘဏ္financialာရေးမှတ်တမ်းများနှင့်အစိုးရအချက်အလက်စသည့် browser ရှာဖွေသူများထံမှဝှက်ထားသောတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပါ ၀ င်သည်။
Allen က, အယ်လ်, Carmody, အမ် (2012). “ ပျော်ရွှင်မှုတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိပါ” - လိင်ပညာရေးအတွက်ပျော်ရွှင်မှုအလားအလာကိုပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်း။ လိင်ပညာရေး, 12 (4), 455-468. 10.1080 / 14681811.2012.677208
Google Scholar | Crossref | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Alexa.com (2018) ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှထိပ်ဆုံး ၅၀၀ ဆိုဒ်များ https://www.alexa.com/topsites
Blakemore, အက်စ်, Robbins, TW (2012). ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ သဘာဝအာရုံကြောသိပ္ပံ၊ ၁၅ (၉)၊ 1184-1191. https://doi.org/10.1038/nn.3177
Bowlin, JW (2013) ။ kNOw sextortion - ဒီဂျစ်တယ်шантажခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ရန်သင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်အလက်များ။ Scotts Valley, CA: CreateSpace လွတ်လပ်သောထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်း။
Braun, V. , Clarke, V. (2006). စိတ်ပညာအတွက်အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုခြင်း။ စိတ်ပညာအတွက်အရည်အသွေးသုတေသန,3(2), 77-101. https://doi.org/10.1038/nn.3177
Chen, အိပ်ချ် (2011) ။ ဝဘ်အမှောင်: ဝဘ်၏အမှောင်ဘက်အားရှာဖွေခြင်းနှင့်အချက်အလက်ရှာဖွေခြင်း။ Springer သိပ္ပံ & စီးပွားရေးမီဒီယာ.
Creswell, JW (2009). ရောထွေးနည်းလမ်းများသုတေသန၏လယ်ပြင်မြေပုံ။ ရောနှောထားသောနည်းလမ်းများသုတေသနဂျာနယ်၊ ၃ ။ 95-108.
သရဖူတရားစွဲဆိုမှုဝန်ဆောင်မှု။ (2017) ။ အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ။ https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/extreme-pornography
သရဖူတရားစွဲဆိုမှုဝန်ဆောင်မှု။ (2018) ။ လူမှုမီဒီယာ - ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်ပေးပို့သောဆက်သွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အမှုများကိုတရားစွဲဆိုခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်။ https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/social-media-guidelines-prosecuting-cases-involving-communications-sent-social-media
Davidson, ဂျေ, Martellozzo, အီး (2013). လူငယ်များ၏လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာများကိုအင်တာနက်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွင်အသုံးပြုခြင်းကိုလေ့လာခြင်း - ယူကေနှင့်ဘာရိန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်။ သတင်းအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ၁၆ (၉)၊ 1456-1476. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.701655
DCMS ။ (2016) ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဥပဒေကြမ်းအပိုင်း ၃ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ။ https://www.gov.uk/government/publications/digital-economy-bill-part-3-online-pornography
Denzin, N. K သည်။ (2012). Triangulation ၂.၀။ ရောနှောထားသောနည်းလမ်းများသုတေသနဂျာနယ်၊ ၆ (၂)၊ 80-88. https://doi.org/10.1177/1558689812437186
Gov.co.uk (2019, ဧပြီလ 8) ။ အွန်လိုင်းအဖြူရောင်စက္ကူကိုထိခိုက်စေတယ် https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper
အစိုးရ၏အင်တာနက်လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာ။ (2018) ။ အင်တာနက်လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာအစိမ်းရောင်စက္ကူ။ https://www.gov.uk/government/consultations/internet-safety-strategy-green-paper
Hartley, ဂျေ (2008) ။ ရုပ်မြင်သံကြားအမှန်တရားများ - လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုတွင်အသိပညာဗဟုသုတများ။ ဂျွန်ဝီလီ.
ဟာနန်, အေ (2019, အောက်တိုဘာလ 24). မူဝါဒကိုမရုပ်သိမ်းခင်အစိုးရသည်ပေါင် ၂ သန်းအကုန်အကျခံခဲ့သည်။ အုပ်ထိန်းသူ။ https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/24/government-spent-2m-on-porn-block-before-policy-was-dropped
Horvath, MA, Alys, L. , Massey, K. , Pina, အေ, Scally, M. , Adler, JR2013) ။ “ အခြေခံအားဖြင့်ပေါ့။ ။ ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်လျင်မြန်စွာသက်သေအထောက်အထားအကဲဖြတ်ခြင်း။ https://kar.kent.ac.uk/44763/
Hsu, C, Sandford, BA (2007). Delphi နည်းပညာ - သဘောတူညီမှုကိုနားလည်ခြင်း။ လက်တွေ့အကဲဖြတ်ခြင်း၊ သုတေသနနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ၁၂ (၁၀)၊ 1-8. https://pdfs.semanticscholar.org/1efd/d53a1965c2fbf9f5e2d26c239e85b0e7b1ba.pdf
Jaishankar, K. (2009). Sexting: victimless ရာဇဝတ်မှုပုံစံအသစ်? ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ ၃ (၁)၊ 21-25. http://www.cybercrimejournal.com/editorialijccdjan2009.htm
Johnston, ဂျေ (2019) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အသက်စစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုအစိုးရမှဖျက်သိမ်းလိုက်သည် https://www.publictechnology.net/articles/news/government-drops-plan-age-verification-adult-websites
Martellozzo, အီး, ဂျိန်း, အီး (2017) ။ ဆိုက်ဘာပြစ်မှုနှင့်ယင်း၏သားကောင်များ။ Routledge.
McGeeney, အီး, Hanson, အီး (2017) ။ လူငယ်များ၏သူတို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများတွင်နည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်သောသုတေသနစီမံကိန်း။ တစ် ဦး ကအမျိုးသားရာဇဝတ်မှုအေဂျင်စီနှင့် Brook. https://www.basw.co.uk/system/files/resources/basw_85054-7.pdf
McNair, ခ (2013) ။ porno? ကောင်းသည်! ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေပြီးပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ Routledge.
ဟုတ်ပါတယ် (2016) ။ အွန်လိုင်းတီဗွီသည်ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/childrens-media-use
Onwuegbuzie, AJ, Leech, NL (2005). လက်တွေ့ကျကျသုတေသီတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်တွင် - အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာသုတေသနနည်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၏အရေးပါမှု။ လူမှုသုတေသနနည်းနာ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ ၈ (၅)၊ 375-387. https://doi.org/10.1080/13645570500402447
Paasonen, အက်စ်, Nikunen, K. , Saarenmaa, အယ်လ် (2007) ။ ညစ်ညမ်းမှု - မီဒီယာယဉ်ကျေးမှုတွင်လိင်နှင့်လိင်။ Berg ထုတ်ဝေသူများ.
ပတေရု, ဂျေ, Valkenburg, pm တွင် (2006). မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအွန်လိုင်းပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ဆီသို့အပန်းဖြေသဘောထားများ။ ဆက်သွယ်ရေး၏ဂျာနယ်, 56 (4), 639-660. https://doi.org/10.1080/15213260801994238
စာနယ်ဇင်းအသင်း။ (2015, သြဂုတ်လ 6). Selfie နိုင်ငံ - ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေဟာတစ်နှစ်ကို ၁.၂ ဘီလီယံအကြားမှာကိုယ်ပိုင်ပုံတွေရိုက်နေကြတယ်။ အုပ်ထိန်းသူ။ https://www.theguardian.com/uk-news/2015/aug/06/selfie-nation-britons-take-own-picture-12bn-times-a-year
Smith ကဂျေ, Firth, ဂျေ (2011). အရည်အသွေးဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: မူဘောင်ချဉ်းကပ်မှု။ သူနာပြုသုတေသီ၊ ၁၈ (၂)၊ 52-62. https://doi.org/10.7748/nr2011.01.18.2.52.c8284
Stanley, N. , Barter, C, Wood, အမ်, Aghtaie, N. , Larkins, C, Lanau, အေ, Överlien, C. (2018). ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလူငယ်များ၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး - ဥရောပလေ့လာမှု။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ ၃၃ (၁၉)၊ 2919-2944. https://doi.org/10.1177/0886260516633204
Tempterton, ဂျေ (2016, နိုဝင်ဘာလ). ယူကေအစိုးရသည်အသက်စစ်ဆေးမှုများမပံ့ပိုးသောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ပင်ရန်စီစဉ်နေသည်။ ဝါယာ။ https://www.wired.co.uk/article/porn-age-verification-checks-digital-economy-act-uk-government
ကလေးသူငယ်အင်တာနက်အင်တာနက်လုံခြုံရေးအတွက်ယူကေကောင်စီ။ (2017). https://www.gov.uk/government/groups/uk-council-for-child-internet-safety-ukccis#ukccis-members
Valkenburg, pm တွင်, ပေတရု, ဂျေ (2007). Preadolescents နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုနှင့်သူတို့နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်ရင်းနှီးမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ, 43 (2), 267-277. https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.2.267
Valkenburg, pm တွင်, ပေတရု, ဂျေ (2009). ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အင်တာနက်၏လူမှုဆက်ဆံရေးအကျိုးဆက်များ - ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုသုတေသနတစ်ခု။ စိတ်ပညာသိပ္ပံ၏လက်ရှိလမ်းညွှန်များ၊ ၁၈ (၁)၊ 1-5. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01595.x
Valkenburg, pm တွင်, ပေတရု, ဂျေ (2011). မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး - ဆွဲဆောင်မှု၊ အခွင့်အလမ်းနှင့်အန္တရာယ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ။ ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 48 (2), 121-127. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.08.020
Vigras, V. (2016) ။ PAS 1296၊ အွန်လိုင်းအသက်စစ်ဆေးခြင်း - ကျင့်ထုံးဥပဒေ။ https://www.dpalliance.org.uk/pas-1296-online-age-checking-code-of-practice/
Waterson, ဂျေ (2019, အောက်တိုဘာလ 16). အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေအသက်အရွယ်အတည်ပြုခြင်းစနစ်အတွက်ယူကေသည်အစီအစဉ်များကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ အုပ်ထိန်းသူ။ https://www.theguardian.com/culture/2019/oct/16/uk-drops-plans-for-online-pornography-age-verification-system?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2_LemndmS1kI9RL-_E-ADDgCA9Xd0T7jBuldXfAE8yIG8g6iqkftM1viM#Echobox=1571236161
Weale, အက်စ် (2015, နိုဝင်ဘာလ). Sexting သည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်“ စံ” တစ်ခုဖြစ်လာလျှင်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများအားသတိပေးပါ။ အုပ်ထိန်းသူ။ https://www.theguardian.com/society/2015/nov/10/sexting-becoming-the-norm-for-teens-warn-child-protection-experts
Webster, အက်စ်, Davidson, ဂျေ, Bifulco, အေ (2014) ။ အွန်လိုင်းမှားယွင်းသောအပြုအမူများနှင့်ကလေးများအားအကြမ်းဖက်ခံရခြင်း - တွေ့ရှိချက်အသစ်များနှင့်မူဝါဒ။ Palgrave အေ.
ဝံပုလွေ၊ N (2012, အောက်တိုဘာလ). Amanda Todd ၏သတ်သေမှုနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများကလူငယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း။ အုပ်ထိန်းသူ။ https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/26/amanda-todd-suicide-social-media-sexualisation
အယ်လီနာ Martellozzo Middlesex တက္ကသိုလ်မှရာဇ ၀ တ်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးလိင်မှုကျူးလွန်သူများအပြုအမူ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကလေးဘေးကင်းရေးကိုအထူးပြုသည်။ သူမသည်ကလေးသူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊ ကြီးလေးသောပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၊ လေ့ကျင့်သူများနှင့်အတူကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုအွန်လိုင်းအပြုအမူနှင့်အန္တရာယ်များကိုလေ့လာခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနယ်ပယ်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့အလေ့အကျင့်များပါဝင်သည်။
Andrew Monaghan Middlesex တက္ကသိုလ်မှရာဇ ၀ တ်မှုပညာရှင်ဖြစ်ပြီးသူ့ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်တွင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသောပုံများ၊ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အွန်လိုင်းအန္တရာယ်များရှိသည်။ သူသည်လက်ရှိတွင် Horizon 2020 စီမံကိန်း၏ပါရဂူဘွဲ့သုတေသနသုတေသီတစ် ဦး အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်စနစ်တကျကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုများ၏အကြောင်းရင်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသောအီးယူတစ်ခုလုံး၏သုတေသနလေ့လာမှုဖြစ်သည်။
ဂျူလီယာဒေးဗစ်ဆန် အရှေ့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူသည်ယူကေတွင်ကလေးသူငယ်များအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အကြီးအကျယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်းအမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာသုတေသနများစွာကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ဂျိုနာအဒယ်လာ Hertfordshire တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူမသည်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်အရပ်ဘက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူများ၊ သူမသည်ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့်ဥပဒေကျောင်းမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကဏ္inများတွင်သုတေသနနှင့်အကဲဖြတ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အတူတကွ၎င်းတို့သည်အသုံးဝင်သော၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာတိကျခိုင်မာမှုကိုအခြေခံသောအလုပ်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။